AC Milan oo Man Utd ku felisaysa James Rodriguez (€60 milyan oo euro oo ay miiska saartay & Madrid oo ku qanacday) – Gool FM
(Milano) 21 Juunyo 2017 – Sida uu qorayo Don Balon, AC Milan ayaa la diyaar ah dalab ku kacaya 60 milyan oo euro oo ay Rossoneri xagaagan ku rabta adeegga James Rodriguez, jeer ay PSG dhinacyo kale u jihaysatey.
Laacibka oo ay sidoo kale doonayaan Bayern Munich iyo Manchester United ayay kooxda Aldo Rossi ku doonaysaa €60 milyan oo euro taasoo la sheegay inay ku qanacday Real Madrid (waayo waa dalab ka badan 40 milyan, oo ilaa haatan ka yimid Premier).
James ayaa la sheegaya inuu weli door bidayo mashruuca Manchester United, tiiyoo uu Florentino Pérez la dhacsan yahay dalabka Rossoneri proposal: oo miiska saartay dalab ka qaalisan midka Man Utd, taasoo Milan ka dhigaysa kooxda safka hore uga jirt adeegga xiddigii hore ee Porto iyo Monaco.
“Kaliya lacag uun ayuu ka doonayaa Real Madrid ee wax kale ma jiraan.”. Jose oo rajo badan ka qabin Cristiano Ronaldo